.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: ကျွန်တော့် ဆိုဒ်က ဘောင်ခတ်တာလေး လိုချင်တဲ့သူတွေအတွက်..
ကျွန်တော့် ဆိုဒ်က ဘောင်ခတ်တာလေး လိုချင်တဲ့သူတွေအတွက်..
ဒီလို ဆိုဒ်ဘောင်ခတ်တာကို သဘောကျတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေတော့ မနည်းများတယ်။ ဝဘ်ဆိုဒ် နောက်ခံ [background]
နဲ့ ဘောင်ခတ်တဲ့နည်းတွေကို Web Page တစ်ခုကို ပြင်ဆင်မယ်ဆိုရင်... ဆိုတဲ့ပို့စ်မှာ အပြည့်အစုံရေးပေးထားပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သူတို့က ကျွန်တော့်ဘလော့မှာ လုပ်ထားတဲ့ပုံစံကိုပဲ ကြိုက်နေကြတာနဲ့ ခုတော့ တင်ပေးလိုက်ပါပြီ။
border:1px solid  #428B0F;
box-shadow:1px 3px 7px 3px #FF3366;
box-shadow:  inset00 10px #00FF00;
အပေါ်မှာပေးထားတဲ့ကုတ်ကို အောက်က ပုံလေးတွေအတိုင်း အဆင့်ဆင့်သွားပြီး လုပ်လိုက်ပါ။
[2] Layout ---------->> AddaGadget
[5] Enter Code & Save
မှတ်ချက်။ ။ ခုတစ်လော ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ ပို့စ်တွေကို တစ်ခြားဆိုဒ်တွေမှာ ကော်ပီကူးပြီး တင်ထားတာ
တွေ့နေရပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတို့ ကြိုက်နှစ်သက်လို့ အသုံးဝင်မယ်ထင်လို့ ပြန်လည်မျှဝေမယ်ဆိုရင်..
ကျွန်တော့်နာမည် [ သို့ ] ဆိုဒ်လိပ်စာကို ပို့စ်ရဲ့ တစ်နေရာရာမှာ ထည့်သွင်းဖော်ပြပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။
Posted by Thurainlin at 10:04